RIAA wants Google to do more to fight 'piracy' - Rule News
RIAA doonayo Google in la sameeyo dheeraad ah si ay ula dagaalamaan 'burcad-badeednimada’
Miskiinka duubista Industry Association of America (RIAA) Waa daalay weydiinaya Google in ay hoos u qaadan dhacdooyinka gaarka ah ee la sheegay in jebinta copyright oo uu doonayo in la joojiyo banhammer Maalinta Groundhog.
RIAA ayaa qaatay aragti iska soo horjeeda in Google ayaa sare ee talada siyaasadda copyright Katherine Oyama ee iyada maragga hor Golaha Wakiilada US Intellectual Property Hoosaadka Guddiga Garsoorka Isbuucaan.
Oyama ayaa ka marag kacay in sacaadda takedowns ma tahay nidaamka ugu wanaagsan ee, isagoo intaa ku daray in ay sidoo kale u furan yahay caayaane. Waxay sheegtay in Google hadlaya takedowns sida badan in toddobaadkii in 2014 sidii lagu sameynayo oo dhan of 2010.
“Habka ugu fiican ee dagaal-badeednimada waa la fiican, dheeraad ah oo ku haboon, kale oo sharci ah si ay burcad badeeda, sida adeegyada laga bilaabo Netflix in Spotify in iTunes ayaa soo bandhigay,” ayay tidhi. “Isku saxda ah ee qiimaha, sahlanaato, iyo alaabada ka sii samayn doonaa si loo yareeyo burcad badeeda ka fulin kartaa.”
RIAA ayaa waxa uu hadal u gaar ah in guddi hoosaadka, iyo ayaa sidoo kale la siiyaa qof kasta in uu doonayo la nuqul ka mid ah marag Oyama ee la qoritaan gaaban u gaar ah (PDF). RIAA The jecel yahay Act Digital ee Kun-Copyright (DMCA) nidaamka, laakiin waxa aanu u arkaan in ay niyad.
Talo Google ayaa sheegay in mid ka mid wax, RIAA soo qaaday khadka horjeeda. Tusaale ahaan, halkaas oo ay ku talinayaa nidaamka iskaa wax u qabso RIAA ka jawaabay isagoo sheegay in Google “aan weli si dhab ah u marti qaaday fikradda ah heshiis aan khasab ahayn la milkiilayaasha content”.
RIAA ayaa sidoo kale lagu daabacay maragga ay guddoomiyaha iyo CEO, Cary Sherman. La socoto rafcaanka in la ansixiyo hababka kormeerka, Sherman weydiiyay Google ay joojiyaan ciyaarta maalin kasta of 'whack-a-bar caawin’ in ay u ciyaaraa.
“[Google waa] loo hubiyo in marka links to content laga qaadayaa hoos, content isla goobta isku aan si joogto ah dib-u-eegid markii Aasiiriya by goobta burcad ah, haya'ad habka wax aanjirin u khasaarinayaa,” ayuu yiri.
RIAA ayaa sidoo kale jeclaan lahaa in aan arko 'badeeda’ websites deranked, oo lagu qasbay jidka hoos on natiijooyinka raadinta, sidoo hordhaca ah ee a “ku kalsoon tahay” calaamad waayo waxa u arko websites sida sharciga ah. Ugu dambayntii, waxa ay u muuqataa in ay kaliya doonayo kortaan sahlan.
“Wax kasta oo Google hoos u qaadataa maanta, ay search engine Spider doonaa goobaha burcad berri iyo index mar kale oo dhan content isla-darrada ah goobaha burcad badeeda ah. All xiriir la khatar files music la si toos ah Aasiiriya by goobta burcad kasta ka dib markii wax aanjirin maanta kuwa la dib-u-eegid doonaa oo u muuqdaan in natiijooyinka raadinta berri,” Added Sherman.
“Maalin kasta waxaan u leeyihiin in ay soo diri ogeysiis cusub oo ay ku soo dejiyo ee links aad isku to content sharci-darrada ah waxaannu u qaaday maalin ka hor. Waa sida 'Maalinta Groundhog’ waayo takedowns.
21745	0 Cary Sherman, Xeerka Digital Millennium Copyright, Google, Maalinta Groundhog, Hantida aqooneed, iTunes, Duubista Industry Association of America, RIAA
← Lix maraakiibta Indian geeyay search for jet Malaysia Planet X quraafaad beenoobay →